XISBIGA SV OO AH XISBIYADA HAYA TALADA DALKA NORWAY OO SHIR LA YEESHAY WAKIILKA SOMALILAND IYO XUBNO METALAYEY QEYBAHA ISKU HAYA KOONFURTA SOMALIYA. | WWW.SOMALILAND.NO
XISBIGA SV OO AH XISBIYADA HAYA TALADA DALKA NORWAY OO SHIR LA YEESHAY WAKIILKA SOMALILAND IYO XUBNO METALAYEY QEYBAHA ISKU HAYA KOONFURTA SOMALIYA.
Oslo(sl.no) 25, apr. 2008 – Xisbiga SV (Socialist Left Party) oo ka mid ah saddexda xisbi ee haya talada dalka Norway ayaa maalintii shalay la qaatay kulan hawleed wakiilka Somaliland iyo xubno ka socday qeybaha isku haya Somaliya. Kulan howleedkaa oo ujeedadiisu ahayd bal in xisbigu macluumaad sugan ka helo xaalada uu ku sugan yahay dalkii Somaliya la isku odhan jiray.
Shirkaa waxa soo agaasimay Xafiiska Arimaha Caalamiga ah ee xisbiga, waxaana guddoominayey gudoomiye ku xigeenka xafiiskaa Mudane Xamse Maxamed iyo masuuliyiin ka socday xisbiga. Waxa kale oo shirka lagu soo casuumay Mr. Istig Jarle Hansen oo ah khabiir ku xeel dheer arimaha Somalida isla markaana dawladda Norway wax ka weydiiso arimaha Somaliya.
Furitaankii shirka ka dib, waxa xog waran dheer oo ku saabsanayd arimaha Somaliya iyo Somaliland halkaa ka soo jeediyey Mr. Istig, isaga oo dadkii halkaa isugu yimi siiyey xog soo koobaysa tan iyo dhicitaankii dawladii Maxamed Siyaad ilaa imika xaaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dalkii la isku odhan jiray Somaliya.
Wakiilka Somaliland ee dalka Norway Mudane Maxamed Maxamuud Aadan (Lenin) ayaa isugu halkaa ku soo bandhigay qadiyadda Somaliland iyo marxaldihii kala duwanaa ee dalku soo maray. Waxaaanu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay waxan ka socdaa dalka Somaliland, waxa aanu ku dhismay hab ka duwan waxa ka jira koonfurta Somaliya. Waxa aan ka unugnay dalkan curdinka ah shirar ay isugu yimaadeen bulshada intoodii wax garadka ahayd. May ahayn shir kaliya, waxa aanu soo qabsanay shirar taxane ah sida kii Burco, Borama iyo Hargeysa.
Shirarkaa waxa aanu qabsanay kaligayo iyada oo aanay nagu dhex jirin cid dibadda nooga timi oo na dhex-dhexaadinaysaa. Halka koonfurta Somaliya loo qabtay dhawr iyo toban shir. Shirarkaa oo dhaqaale badan caalamku ku bixiyey, ilaa iyo imikana aan wax natiijo ah laga gaadhin. Waxa dalkayga ka qabsoomay doorashooyin si dimuqraadi ah u dhacay. Dumarkayagu waxay si nabad gelyo ah safaf dhaadheer ugu galeen doorashooyinkaa, halka kuwa koonfurta Somaliya ay nabadgelyo xumadu ehelka u noqotay. Waxa kale oo wakiilku ka sheegay shirka inay qabsoomayaan doorashooyinka soo socdaa xilligii loogu talagalay. Wuxu hadalkiisii ku soo gaba-gabeeyey waxan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dawladan Norwayba in ay aqoonsadaan Somaliland. Isla markaana ay ogolaadaan xaqa aanu u leenahay aaya ka talintayada.
Shir-hawleedkaa waxa kale oo ku soo bandhigay warbixino iska soo horjeeday xunbo matalayey qeybaha iskaga soo horjeeda koonfurta Somaliya. Warbixinahaa oo qaarkood iftiimanayeen ku xad gudubka xuquuqul insaanka iyo xasuuqa ciidamada Itoobiya iyo Dawladdu ka wadaan koonfurta Somaliya siiba Magaalada Muqdisho. Halka warbixinaha qaarna eeda dusha uga tuurayeen ururka Al-shabaab iyo Ururka dib u xoreynta ee lagu soo dhisay Eritrea.
Gaba-gabadii shir-hawleedka Xamse Maxamed oo ku hadlayey afka shir gudoonka ayaa ka codsaday qeybihii ka qeyb galay shirka in ay qoraal ku soo gudbiyaan sida ay u arkaan in Somalidu dhibta kaga bixi karto.
« OGEYSIIS SHIR MADAXDA XISBIGA KULMIYE LAANTA NORWAY UGU BAAQAYAAN XUBNAHA XISBIGA EE DEGAN DALKAN WAR-SAXAAFADEED KA SOO BAXAY MADAXTOOYADA JSL »